डीआरको गोरेटो : 2016
लेखक - डि आर न्यौपाने "सूर्य" . 14 August 2016
लेखक - डि आर न्यौपाने "सूर्य" . 14 May 2016
कतार एयरवेजको ७४७ को यान संगै मातृभुमी र आफन्तहरुको न्यानो कोखमा रम्ने आशा सहित यात्राले एक चौथाई भाग पुरा गरिसकेको छ । हवाई यात्राको ट्रान्जीटलाई काखे साथी ल्यापटपमा आखाँ घुमाउदैछु म । केहि बेरमै गेट न. ८ बाट एक हुल नेपालीहरुको आगमन भएजस्तो लाग्यो । गएर बुझे मेरो अनुमान मिलेछ।एक्लीएको म ल्यापटप बन्द गरेर उतैतिर पाइला सारे । समुहकी नारीहरु सङग मेरो पनि नेपालीको नाताले नाता गासियो अनि अलिकति खुसीसाथ एक्लोपनाको निवारण गर्न तिर लागे ।नेपालीहरु मध्ये महिलहरुको संख्या अधिक । सामान्य जानकारी अनुसार इज्राएल रोजिगारमा गएका केही महिलाहरू स्वदेश फर्कदै रहेछन । संगठित मस्तिष्कले पनि राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्न पनि सकेन त्यो बेला। आफ्नै परिचयलाई तिब्र बनाउदै समुहकी एउटी महिला लाई देखेर म आश्चर्यमा परे । म मौन बने र मेरो स्मरणलाई धान्दा धान्दै पनि मुखबाट फुत्त निस्कीएछ ज्योति भनेर
तर समुहकी अर्की नारीले मेरो मौनतालाई भंग गर्दै भनीन उनी ज्योति हैनन जेनि । मेरो दोधारलाई चिरफार गर्दै मै पट्टी लम्कदै गरेका उनका शब्दले छोयो मेरो कानमा । अब त लाग्यो आखिर परिचय त अझै नयाँ नै रहेछ हाम्रो ।परिचयको लगाम समाएं मैले भने
म “सिकारु"। जवाफमा मुसुक्क मुस्काउदै आफ्नो परिचयलाई अथ्यार्इन उनले। म जेनि , मृतसागरको पानी पिएर आको।
उनको ब्यङगात्मक कुरो मैले पनि बुझिहाले । अनि शुरु भयो हाम्रो बहसको बिस्तारको लगाम ।
सामान्य कुराकानी,पारिवारिक तालमेल र वैदेशिक रोजगारीको अवसर र बाध्यता दुबैको मिल्दोजुल्दो नै लाग्यो। सिकारु यो कस्तो नाम? तिमी त जुझारु यानिक निपुण जस्तो देखिन्छौ फेरि किन सिकारु ?
ब्यङग्यले भरिएका प्रश्नहरुमा मुहारमा झल्केको ज्योतिलाई नियाल्दै जवाफ ओकले मैले ।
उसो त तिमिपनी ज्योति हुनुपनेर् कारण तिमी दीप जस्तै बलिरहेकी छौ ।
मैले पनि केहि ब्यङग्य प्रस्तुत गरे । छोडनुस यि कुरा नाम कहिले रहरले कोरिदो रहेछ त कहिले बाध्यताले ।
किन? आफ्नो नाममा पनि कसैको अधिकार हुन्छ र ? नाम परिवर्तन स्वेच्छाको बिम्ब होइनर ? प्रश्नको उत्तर दिन फ़ेरि मैले अतित खोतिल्नतिर लाग्नु भन्दा टार्ने बिचारले हँ मा अ मिलाइदिए।
हुनत म पनि नाम परिवर्तनको शिकार हुँ । भैगो छोडनुस यी कुरा ।यतिका लामो अन्तरालमा निश्ठुरिले एकपटक पनि खोज्ने प्रयास गरेन ।
हँ के भनेको? स्वरको भोलुम घटाई भिन्दैथिइन उनी ।त्यसैले मैले नसुनेको झैगरि मौन बसे । सायद दुबैको प्रश्न एउटै थियो
जीवनको यो लामो बिछोडमा म जस्तै उनी पनि कुनै अतितमा हराइन जस्तो ।परिचयलाई लम्ब्याउदा उनको करिब आधा दसकको अवधि मृत सागरमा तैरिएछ , जस्तो मेरो मरुिभुममा बित्यो । । दोहा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलबाट काठमाडौंको लागी टर्मिनल ८ हुदै उडान भर्न लागीरहेको बोइङ ७४७ को बोडीङ पास लिएर हामी हाम्रो सीट नं एफ २८ र ३० मा बस्न पुग्यौ । सीट फरक परे पनि संगै बस्ने तीब्र ईच्छाका कारण एफ २९ को साथी अन्जान संग अनुरोधको हात फैलाउदै एकै ठाउँमा बस्ने ब्यवस्था मिलायौ र शुरु भयो हाम्रो भलाकुसारी ।
जेनि कसरी तिमि नाम परिवर्तनको शिकार भयौ ? अघीको सानो आवजलाई मैले ठुलो पारे ।
कता कता केहि मिलेजस्तो लाग्ने हाम्रो यात्रामय साथको ग्यापलाई खाली नराख्न मैले केही न केही बहाना अवस्य झीक्नु थियो। मेरो व्यग्रतालाई शान्त पार्न केही मलिन आवाजमा उनले मुख खोलीन ।
त्यो दिन त्यो शहर र त्यो काललाई मैलेकहिले भुल्न सकेको छैन सिकारु जि ।
फ़ेरि सोधे कस्तो दिन ? कस्तो काल र कस्तो परिस्थितिको कुरा गर्दै छौ तिमी ?
सिकारु महाशय ! मेरो अतितलाई यस्ता सिकारुले बुझन सक्दैनन।
फेरि हासो ।
जेनि जि मलाई तपाइका भावले जुझारु बनाउनु न (दुबैले तिमी र तपाइको प्रयोग गरेका छौ घरी घरी )धेरै ठुलो कुरो भए त्यै प्रेमको धोका त होला नि ? या कुनै पारिवारिक वियोगान्त कथा होला मैले जानेजस्तो गरि घोचे।
के थाह आफू सिकारु बाट भिखारी भाको तैपनि कल्पना गर्दै बोले ।
ब्यङगै ब्यङग्यमा अनुहारमा बादल लगाई बोल्न थाली उ ।
सिकारु जी कुनै बेला थियो आकाश र म एकै गाउ-ठाउका , वामे सर्दा देखी यौवनले काउकुती लगाउने बेला सम्म एउटै परिचय बोकेको हाम्रो मित्रताले प्रेम डोरोलाई पनि कताकता अगाल्न लागिसकेको अनुभुती गराएको थियो तर हामीलाई समयले फेरि कसरी भेट गराउला अब थाह छैन? तर उहाको अनुपस्थितमा कति कष्टकर बनेर बित्यो मेरो यत्रो पलहरु । सायद त्यै दिन थियो हाम्रो आत्मियताको प्रगाढ सम्बन्धलाई चटक्क छिनाएर नदीबाट दुई किनारा बनाइ हीडेको। शुरुवात त त्यै थियो नि हाम्रो ।
मैले बोलिहाले तर अब नबोल्ने बाचा गरे बिचमा किनकी उनी त्यै अतीतमा हराउदै बोलिरहेकी थिइन ।
स्कुले जीवनको अन्त्यतिर आइपुग्दा हाम्रो मित्रताको लहरोले भर्खर अंकुराउन लागेको प्रेममय पललाई पनि अङ्गिकार गर्न लागेको थियो सायद त्यसैले त मित्रताको भावले प्रेमको आत्मीयता पनि खोज्दै थियो । भिन्न बिचारका सहपाठी भएर पनि जीवनको गन्तब्य एउटै खोज्दै थियौ हामी ।उहा आफ्नो कुरामा अढीग हुनुहुन्थ्यो भने म स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा कति मरि मेटथे ।
(हैन यत्रो लामो समय धोका दिएर हराउनेलाई पनि तपाई भनी सम्बोधन गदैर् छ ऊ फेरि मनमनै सोचे ) उनि भन्दै छीन...
शिशु देखी स्कुल छोडने बेला सम्म आइपुग्दा हामी बिच कहिल्यै चर्को आक्षेप र दोषारोपण पनि भएन । म उहालाई परकिय भन्न पनि कहिले सक्दिन । उँहा परोक्ष म पनि एकलै भएकी छु ।त्यो समाजले कोरेको लक्ष्मण रेखाको पराकाष्ठा नाघेर समाज संग परास्त भएर म हिडनुले त्यो समाजले मलाई कातर सम्झेको होला तर नारी अस्तित्वको मर्म नबुझेको त्यो समाज प्रती मेरो कत्ति गुनासो छैन । म त्यो जन्मठाउ छोडेर जहा गएपनी मलाई त्यै पणिकुर्ट नै प्यारो लाग्थ्यो।
मैले सुन्दै ह मा अ मिलाउदै छु। ऊनी भन्दैछिन।
तर मलाई त्यो परिवेशमा मेरै निर्णयले आँखा चिम्लिन बाध्य बनायो र चिम्लिए पनि तर जब मैले आबेगलाई सहारा बनाउदै सुखद भविस्यको कल्पना गर्दै यो शहरको रंगमा घुलमिल हुने प्रयास गरे तर मेरो शहर मैले सोचेजस्तो रहेनछ । म त सोच्थे शहरमा पढेलेखेका, शिक्षित र मानवीय भावना बोकेका मान्छे मात्रै होलान ।अर्काको दुख-सुखमा साथ देलान।जहाँ म आफ्नो लगनशीलता र स्वाभिमान लाई प्रयोग गरि जीउन सक्नेछु। तर मेरो सोच गलत साबित भयो मेरो लागी आधुनिकतामा बेरिएको त्यो शहर त केबल चुसक, स्वार्थी र लुटाहा प्रवृत्तिको रहेछ ।
जहाँ-जहाँ मैले आफ्ना प्रगति पथका पाइलाहरु बिछ्याउदै हिडथे त्यहाँ मलाई पछाडिबाट कसैले तानिएको हुन्थ्यो। मैले त्यो पर्णकुटी जसरी त्यागे त्यो भन्दा सयौ गुणा मलाई यो शहरसंग जुध्न भयो । म पाइला पाइला मा लुटीएकी हुन्थे ।नारी भक्षक सहितानहरु मेरा अघिपछि घुमिरहेका हुन्थे ।जहा मैले जति नै आदर्शको कुरा गरेपनि सुन्ने कोहि हुन्नथ्यो। अनि म त्यै हाम्रो पलपलको साथ सम्झेर रोइरहन्थे तर मेले वाचा गरिसकेको थिए कि जबसम्म मेरो लक्षमा म पुग्दिन तबसम्म घर फर्कने छैन । त्यसपछि नत मेरो लक्षमा म पुगे नत त्यो रुन्चे अनुहार लिएर गाउ नै पुग्न सके। मलाई समयले त लुटयो लुटयो त्यो शहरले पनि लुटयो। मैले त यस्ता कुरा पर्दामा मात्रै देखेकी थिए जब वास्तविकतामा आफै पर्दा बनेर खुम्चिए अनि मलाई एउटा उज्यालो सहरको अध्यारो परिवेश र पर्दाका गतिविधि उस्तै उस्तै लाग्न थाल्यो।जति शहरका ती पशुगत र निन्दनय ब्यवहारमा मलाइ बिचरण गरियो । त्यति नै उनीहरु आफुलाई उच्च कोटिको दर्जामा राख्थे र शोषकहरु आफुलाई विजयी प्राप्त भएको अनुभव गरि रमाउथे। हुदा हुदा मलाई अबत एउटा असल र स्वच्छ मान्छे अगाडि उभिदा पनि त्यही भक्षकको रुप नै कल्पना गर्थे। सायद लुटिनुको वास्तविकता झल्केको होला तर जे भएपनि मेरो उत्पीडनको ज्वाला झन झन बली नै रहयो।म यो पुरुष प्रधान समाजको लागी चुनौती दिन चाहन्थे तर एक्लीएकी मलाई कस्ले हात दिन्थ्यो र ? त्यै शहरले मलाई ज्योति बाट जेनि पनि बनायो ताकि मेरो पहिचानले त्यो दीप जस्तो ज्योतिको अपमान भएको आभास नहोस। नारी स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउदै चुलो चौकोमा सिमित पार्दै पुरानो युग देखाउने त्यो समाज र बाहिर नारी स्वतन्त्रताको बिगुल फुकेर दनिभर गोष्ठी र सेमिनार देखाउने अनि साझ परेपछि आँखा चिम्ली खेलौना सम्झेर बाजी मार्न कम्मर कस्ने शहरको दैनिकीमा पनि म अटाउन सकिन । त्यसैले म मेरो एकजना आफन्तको साहारामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने निधो गरे। बिना अर्थ घर न घाटको दोसाधमा जीवनलाई उभ्याउनु भन्दा मेहनत गरेर फल लिनु नै राम्रो लाग्यो अनि पुगे म मृत सागरको क्षितिजमा केहि आशा र भरोसा बोकेर।अहिले आफ्नो अवधि पुरा गरि फर्किदै छु । सायद मैले आकाशको वास्तविक बिचारका अनुरोधलाई राम्ररी नियन्त्रण गर्न नसक्नु र समस्याहरुलाई सिमित समयमै निराकरण गर्न नसक्नु नै यो परिस्थिति निम्त्याउनु हो जस्तो लाग्छ । यदी मैले आकाशको साथ पाएको भए मनको शान्तिमा जीवन पर्यन्त संतुष्टीको मीठो साथ पाउथे होला ।मेरो एक्लोपना निवारणको लागी उ मुहान बन्थ्यो होला ।उसको अनुरोधको पारखी भएको भए मलाई यो निष्प्रेममा प्रेम ,डरमा साहस,आँसुमा मुस्कान,अन्योलमा उपाय र अस्थिरतामा स्थिरता मिल्थ्यो होला । म क्षमा माग्न चाहन्छु त्यो मनको मान्छेसंग न म अब उसको नै हुन सक्छु न उ मेरो नै ।
यतिका बेलासम्म मेरो मुहारले पसिनामय आँसु संगै चित्त ब्याकुल बनाएको छ। कतै मेरो मनलाई बर्षौ पहिले चटक्क छोडेर हिड्ने ज्योति यिनै त होइनन? एकातिर डरले काप्दैछु त अर्कोतिर मनले जप्दैछु म ज्योती मागेर । तर कसरी हुनसक्छ ? फेरि शारीरिक बनावट पनि त उस्तै छैन ? हु त बिदेशको लवाई खवाइमा परिवर्तन भएको पनि त हुन सक्छ।
मेरो मुहारमा परेको कालोपोतोलाई देखेर आफ्नो मुहारमा केहि बनािवट हाँसो साथ जेनि थप्छिन ।
ओ सिकारु महाशय! दुई-चार कुरा प्रेमका नाटकीय संवाद के गरेकी थिए अनि भावनामा बगेर यसरी किन मुकदर्शक? विमान परिचारिकाले ल्याएको पेय पदार्थको घुटको निल्दै मेरो मनको पिडा यिसर पोखिएछ त्यो हावाको बेगमा ।
जेनि जेनि यो सब के हो तिमी जेनि हुनै सक्दिनौ तिमी मेरो ज्योति हौ ज्योति अनि म तिम्रो आकास कसरी भुलेको ?
अनि सिकारु ? कसरी ? अनायासै मेरा हातहरुले उनलाई सुम्सुम्याउन पुगेछु । फेरि धैर्यताका साथ आफुलाई सम्हाल्दै बाक्य प्रस्फुटन गराउने हिम्मत जुटाउन लागे ।
ज्योति तिमी जेनि बनेजस्तै म पनि तिम्रो अभावमा दिनानुदिन एक्लो हुदैगए। तिमिले गाउँ छोडेर शहर पसेपछि म केबल आकाश बनेरै त्यो हराएको ज्योतिलाई नियालीरहे तर कहिँ पाउन सकिन । समय संगै बढेको तिम्रो जवानी र सुन्दरतालाई पराइको जिम्मामा लगाउने तिम्रो पारिवारिक अन्धो निर्णय तिमिले लत्याउन खोजेकै दिन मेरो खुसीले पनि कहिल्यै रमाउने ठाउँ पाएन ।देशमा आधुनिकताले उच्च जरो गाडेपनी हाम्रो सामाजिक संस्कारले आत्मसात गर्न नसकेरै हाम्रो दिन शुरु भयो ।तिम्रो परिवारबाट बिहेको कुरा चल्नु र म त्यस्को प्रतिद्वन्दी भै हिडेको दिन नै दुई जीवनको नमेटीने दाग बन्यो । ज्योति हुन त मैले हाम्रो बारेमा बैकल्पिक प्रारुप पनि तयार पारीसकेको थिए । तिम्रो प्रेमाशक्तिमा लिन भएर पनि मौखिक रुपमा मौन बसे म । तर जे भएपनि आफ्नो मायाको सन्सार सम्झेर समाजको बखेडा झेल्दै भएपनी मायामार्गी भएर धावन गर्न पनि त तम्सीएको थिए नि। जीवनको गोरेटोमा तिम्रो बनिरहन आफ्नो आचरण पनि त सुधारेकै थिए । तिमी त भनेकी थियौ नि युगल बनाउ भनेर तर त्यो अनैतिकता बोकेको पिलन्धरे समाजको अगाडी पुरुषार्थ देखाएर भगाई परिबन्धमा पर्न नचाहेकै हो तर किन ? थाह छ तिमिलाई? किनकि बिना योजना कच्चो धागोलाई समाएर अरुको अधीनमा जकडीएर बस्न त के कल्पना समेत गर्न मन लागेन मलाई त्यो दिन जस्को कारण तिमी हिडयौ र म एक्लो भए । यस्तै कुरामा दिनहरु बितिरहे र मलाई तिमिले लगाइदिएको आकाशको ताज तिम्रो अभावमा अपुर्ण लाग्यो र प्रेमपिडाको उपासना स्वरूप सिकारु बनेर नयाँ गोरेटोमा हिडने प्रयास गरे । जो मेरो पहिचान बनेको छ अचेल र यसैमा मेरो संसार पनि अडेको छ। मलाई लाग्छ मलाई पनि हाम्रो अतीतको समिक्षक बन्ने अधिकार् त पक्कै छोडेकी छौ भनेरै यति बोल्ने दुस्साहस गरे ।
(अब त उनले पनि लामो समयको हाम्रो प्रेम र अभावको समस्यालाई राम्ररी बुझीसकिछन क्यारे आकाश नै भनी सम्बोधन गनर् थालीन )
आकाश अवस्य छ तिमिलाई यो अधिकार र तिमी निस्संदेह आफ्नो हकको सदुपयोग गनर् सक्छौ। मेरो भावुकतालाई भंग गदैर् उनी मुख खोलीन।
ज्योति हाम्रो बिछोडपछी मैले पनि केहि गर्न सकिन भनौ एउटा हातले ताली बजेन । घरबाट बिहेको कुरा एकोहोरो आइरहयो। २-३ बषर् त तिम्रो आगमन हुन्छ कि भनी बाटो कुरिरहे तर कतैबाट तिम्रो सुइको सम्म नपाएपछि बाध्य भएर बिहे गरे। क्षमा चाहन्छु ज्योति म तिम्रो हुन सकिन तर एक चिम्टी सिन्दुर तिम्रो शिरमा पार्न नसके पनि तिम्रो हरेक सुख-दु:खमा हर कोणबाट साथ दिनेछु भन्ने प्रण गर्दछु
(यतिबेला सम्म हामी दुबैले राम्रो संग आफुहरुलाई सम्हालेका छौ।)
ज्योति था छ ? तिमिलाई मैले आधुनिक नाम चलेका सामाजिक संजालका धेरै पेजहरुमा खोज्दै गए तर तिमी कहि कतै भेटीइनौ भेटनु पनि कसरी ? सायद ज्योति बाट जेनि हुनुको अवरोध होला यो ।
होला तर तिमिलाई पनि त आकाश मानी मैले संसारका सारा बिधुतिय पानाहरुमा खोजीरहे तर आकाश जस्तो उदार मान्छे सिकारु बनी धर्तीमा झरेको के थाहा मलाई ? त्यसैले होला भेटन नसकेको मैले पनि । ( मीठो हासो दुबैजनाको )
यति बेलासम्म आकाश माथ उडीरहेको जहाज कान्तिपुरी नगरिको सिमा सम्म आइपुगेको थियो। एयर होस्टेजले ल्याण्ड गर्दा हुनसक्ने सम्भावित खतराबाट बच्नको लागी सुरक्षानिति बताउदै छन । हामी बिगतलाई हतियार बनाएर वर्तमानमा मिल्ने साथी भई जीउने वाचा सहित छुट्टीने प्रण गरेका छौ ।
लेखक - डि आर न्यौपाने "सूर्य" . 04 May 2016